Igbe / Carton Labeling Machine Manufacturers & Suppliers - China Igbe / Carton Labeling Machine Factory
Igwe FK835 akara akụrụngwa akpaka nwere ike dakọtara na usoro mgbakọ iji kpọọ ngwaahịa ndị na-asọpụta na elu elu na akụkụ ahụ gbagọrọ agbagọ iji ghọta aha njirimara na-enweghị ntanetị. Ọ bụrụ na ejikọtara ya na eriri na-ahụ maka nzuzo, ọ nwere ike ịkpọ ihe ndị na-asọ. Nkọwapụta zuru oke na-egosipụta njirimara dị mma nke ngwaahịa ma na-akwalite asọmpi. A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ kwa ụbọchị, eletrọniki, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
① FK815 kwesịrị ekwesị maka ụdị nkọwa na igbe ederede dịka igbe mbukota, igbe ịchọ mma, igbe ekwentị nwekwara ike ịkọ ngwaahịa ụgbọelu, zoo aka na nkọwa FK811.
K FK811 kwesịrị ekwesị maka ụdị nkọwa dị iche iche, mkpuchi, batrị, katọn na akara ngosi na ngwaahịa ndị na-adịghị mma na mbadamba, dịka nri nwere ike, mkpuchi plastik, igbe, ihe mkpuchi egwuregwu na igbe plastik nke yiri akwa.
FK811 nwere ike nweta akara ngosi mkpuchi zuru oke, njirimara ederede ziri ezi, akara aha ọtụtụ aha na akara akara ọtụtụ, na-ejikwa katọn, eletrọniki, awara awara, ụlọ ọrụ na ihe oriri.
① FK814 kwesịrị ekwesị maka ụdị nkọwa dị iche iche, mkpuchi, batrị, katọn na akara ngosi na ngwaahịa ndị na-enweghị ntụpọ, dịka nri nwere ike, mkpuchi plastik, igbe, ihe egwuregwu ụmụaka na igbe plastik nke yiri akwa.
② FK814 nwere ike nweta akara akara ala na ala, ntinye aha mkpuchi zuru ezu, akara ngosi ziri ezi, akara ngosi ọtụtụ aha na akara aha ọtụtụ, na-ejikarị katọn, kọmputa, nri na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
FK812 na-edebanye aha nke kaadi ngwaahịa, tinye na kaadị, akpa rọba, katọn, akwụkwọ na ndị ọzọ na-emepụta ngwaahịa, dị ka obere plastik na obere akara ngosi.
FK812 nwere ike nweta akara ngosi mkpuchi zuru oke, akara ngosi ziri ezi, akara aha ọtụtụ aha na akara akara ọtụtụ, ejiri ọtụtụ katọn, plastik, kọmputa, kaadị, OEM na ụlọ ọrụ ndị na-ebi akwụkwọ.
FK836Akara akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa nwere ike dakọtara na akara mgbakọ iji kpọọ ngwaahịa ndị na-asọ asọ na elu elu na akụkụ ahụ gbagọrọ agbagọ iji ghọta aha njirimara na-enweghị ntanetị. Ọ bụrụ na ejikọtara ya na eriri na-ahụ maka nzuzo, ọ nwere ike ịkpọ ihe ndị na-asọ. Nkọwapụta zuru oke na-egosipụta njirimara dị mma nke ngwaahịa ma na-akwalite asọmpi. A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ kwa ụbọchị, eletrọniki, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.